Giraanyada Been Abuurka ah, Qarbaha Been Abuurka ah, Laydhka Aluminiumka Been Abuurka ah - Hanvos
Laba Piece HQ9009
Gaadhi Been Abuur ah
Laba Piece HQ9008
faa'iidooyinka Alaabta ceyriinka Tayada ah Giraangirtayadu waxay ka samaysan yihiin alaabta daawaha aluminiumka ee ugu tayada wanaagsan suuqa, oo leh cufnaan yar oo gaar ah iyo dib-u-dejin daxalka oo wanaagsan. Tayada ayaa laga hagaajiyaa isha waxaana la gelbiyaa inta hawsha socoto. Ammaan sare Waxay leedahay xajin xoog leh, waxay yareysaa u janjeeridda jirka marka ay soo jeesato, waxay yareyneysaa siibashada iyo qulqulka, waxay leedahay waxqabad wanaagsan oo shaqeynaya, bareega deggan iyo dabacsanaan dabacsan. Awoodda sare Xaqiijin sare, xoog sare, kuleyl xoog leh oo faafa ...
Halbeegyada Wax -soo -saarka: Sida ku cad qaab -dhismeedka qaab -dhismeedka Habka Wax -soo -saarka: Walxaha Been abuurka ah ： Aluminium SIZE (INCH) WDTH HOLE PCD (MM) OFFSET (MM) Finish 19 8.0 ~ 11 5 100 ~ 150 -9 ~ 52 Rinji.Bush/Polish/Chrome 20 8.0 ~ 12.5 5 100 ~ 150 -3 ~ 68 Rinjiga.Brush/Polish/Chrome 21 8.5 ~ 12 5 100 ~ 150 -3 ~ 66 Rinjiga.Bushush/Polish/Chrome 22 9.0 ~ 12 5 100 ~ 139.7 -8 ~ 78 Rinji .Brush/Polish/Chrome Faa'iidada ugu weyn: (1) Maaddada giraangiraha: 6061 (2) gaarsiinta degdegga ah: 1 toddobaad ...
Waxyaalahayagu waxay inta badan soo saaraan giraangiraha aluminium been-abuurka ah iyo qaybo leh xoog aad u sarreeya oo loo adeegsado baabuur-raacayaasha iyo baabuurta xamuulka ee culus, tababarayaasha, isjiid-jiidka, baabuurta gaadiidka alaabta halista ah, taangiyada, diyaaradaha.
Waxaan nahay alaab-qeybiyeyaal ka badan 30 warshadood oo waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee baabuurta gudaha iyo dibaddaba, sida FAW (Jiefang), DFAC (Dongfeng), FOTON DAIMLER, SAIC-IVECO HONGYAN, Sinotruk, XCMG, Sany, BYD, Yinlong, Yutong, Kinglong, Zhongtong iyo CIMC. Waxaan hubineynaa badeecadeena inay buuxisay dhammaan heerarka caalamiga ah.